सरकार, कसरी छिचोल्ने यो भद्रगोल ? कामको गति कस्तो छ भनेर जनताले जान्न पाउने कि नपाउने ? – समावेशी
सरकार, कसरी छिचोल्ने यो भद्रगोल ? कामको गति कस्तो छ भनेर जनताले जान्न पाउने कि नपाउने ?
मंगलबार, फाल्गुण २८, २०७५ | १८:२१:४९ |
काठमाडौं । एक वर्षमा सरकारको ८० प्रतिशत काम कानुनी झमेलामै अल्मलिए । हरेक क्याबिनेट बैठकका एउटा न एउटा एजेण्डा यही कानुनसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन् । संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको वर्षदिन पुग्यो । संविधानसँग जोडिएका थुप्रै ऐन, कानुन, नियम, निर्देशिका बन्न बाँकी नै छन् । मौलिक हकसम्बन्धी, प्रदेश, स्थानीय सरकारहरूसँग जोडिएका साढे तीन सय कानुन यसबीचमा बनिसक्नुपर्ने हो । संविधानसँग बाझिने कतिपय कानुन संशोधन हुनुपर्ने थियो । नागरिकता, प्रदेश र संघीय, प्रदेश प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनहरू यो अधिवेशनबाट बन्न धौधौ भयो । बाधा–अड्काउ फुकाउन जसोतसो दुई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ गएको त छ ।
एक सय ९३ वटा कानुनको प्राविधिक संशोधन भएमध्ये अरू एक सय ६० वटा हेरफेर हुनै बाँकी छन् । प्रदेशका लागि जारी भएका कानुनमा पनि फेरि दुई सय जति संशोधन गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारको भूमिका, जिम्मेवारी, समन्वय, काम, कर्तव्य अधिकारसहित नयाँ बनाउनुपर्ने कानुनको संख्या चार सयभन्दा बढी छन् । त्यसमध्ये केही टेबुल हुँदैछन् । फागुन २१ पछि संविधानसँग बाझिने हदसम्म सबै कानुन खारेज हुने कारण यो चटारो आइलागेको हो । नत्र, संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने खतरा छ । जस्तो कि कतिपय कानुनबमोजिम कसैलाई पक्राउ गर्नुप¥यो, कर, दस्तुर उठाउनुप¥यो तर त्यसमा पनि कानुन छैन भने कसरी चल्छ राज्य ? प्रचलित कानुनसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भन्ने छ । साझा अधिकारको सूची बनाउनुपर्ने छ । त्यसको मापदण्ड तोक्नुपर्ने छ । कति अधिकार केन्द्रले राख्ने, कति प्रदेशले, कति स्थानीय तहले भन्ने कुरा परिभाषित हुनै बाँकी छन् ।
न्यायाधीशमाथि छानवीन भयो भनिन्छ । कसैलाई काजमा तानिन्छ । ७७–७८ जनामाथि अनुसन्धान थालिएको खबर चुहिन्छ । तर, के भइरहेको छ ? अब के हुन्छ भन्ने सूचना छैन, पारदर्शिता छैन, कारवाही पनि छैन । अर्थात्, अन्यौलको स्थिति छ । यसो गरेर मान्छेको ध्यानलाई विकेन्द्रिकरण पो गर्न लागियो कि भन्ने पनि आशंका छ । मालपोत, नापी, यातायात, टेलिकम, खानेपानीलगायत जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग गाँसिने अड्डाहरूको अनुगमन गर्ने स्थिति पनि कमजोर छ । एउटा कामको लागि तीन–चारचोटि धाउनुपर्ने अवस्था छ । सानो त्रुटी औँल्याएर काम अड्काइदिने कर्मचारीतन्त्र छँदैछ । सेवाग्राहीले पैसा दिन आउलान् र काम गरौँला भन्ने अपेक्षा बढेको छ ।
वाइडबडी जहाजको छानवीनकै कुरा गरौँ न † छानवीन गर्ने अनेकन निकाय छन् । तर, बेलामा माखो मार्ने काम भएन । रवीन्द्र अधिकारीले निर्दोषिताका बाबजुद बाँचुञ्जेल बद्नामीको दाग बोक्नुप¥यो । काम गर्ने जोश जाँगर हराएर, खुम्चिएर, निराशिएर दिवंगत हुनुप¥यो । अख्तियारका हाकिमहरूले अनियमितता गरे भनेर उजुरी पर्छ, छानवीन हुँदैन । उजुरीलाई महिनौँ झुलाएर राखिन्छ । अनि त्यसको टुंगो लगाइन्छ, खुसुक्क राजीनामा गराएर । न्यायालयमा निम्न तहका कर्मचारीले घुस खाएको अवस्था हुन्थ्यो भने दुर्गममा सरुवा गरेर गुपचुपमा मिलाइन्थ्यो ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफ्नो मुद्दा आफँैले हेर्ने प्रबृत्ति छ, सेना र अदालतमा । सेना नागरिक अदालतमा जानै हुँदैन भन्ने जिद्दी गर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, महालेखा, अख्तियार कसैको पहुँच त्यता पुग्दैन । न डर, न भर भनेजस्तो † सेना अहिले लडाइँमा मात्र सीमित छैन । सीमा सुरक्षाबाट त सशस्त्र प्रहरीका कारण फुर्सद छ । यसर्थ नयाँ जिम्मेवारी पाएको छ, विकास निर्माणको । यसको मतलब उसले सरकारको विकास निर्माणसम्बन्धी अतिरिक्त कोष पनि खेलाइरहेको छ । ऊ गोलाबारुदमा मात्र सीमित नभई गैरसैनिक भूमिकामा पनि गइसकेको छ । जनताको करबाट उठेको पैसा चलाउने स्थितिमा छ । प्रश्न उठ्छ, ऊ विकास निर्माणका काममा संलग्न भएपछि आमनागरिकप्रति देखिने गरी जवाफदेहिता र पारदर्शिता रहनुपर्छ कि पर्दैन ? सेनाले जिम्मा लिएको बाटोघाटोसम्बन्धी कामका सिलसिलामा हुने अनियमितताको छानवीन कसरी हुन्छ ?
कामको गति कस्तो छ भनेर जनताले जान्न पाउने कि नपाउने ?
ठेकेदारलाई नियमन गर्ने कानुन खोई ? एउटा फर्म वा व्यक्तिले कतिवटासम्म ठेक्का लिन पाउने ? कति परिमाणको र कति संख्या भनेर निर्धारण हुनुपर्ने कि नपर्ने ? उसैलाई सिँचाइ र उसैलाई भवन, बाटो र पुलको समेत काम दिँदा ठेक्काहरू छरिएर काम राम्रो भएनन् । बेलामा कुनै पनि काम सकिएनन् । समृद्धिको यात्राका एउटा साझेदार ठेकेदार पनि हुन् । उनीहरू पैसाको लोभमा काममाथि कामको चाङ लगाउँछन् र कुनै पनि थालनीले शीघ्र परिणाम दिँदैन । यसमा कस्नुपर्ने त नियामक निकायले हो । एउटा ठेक्कामा काम बिरायो भने अरु कामको भुक्तानी रोक्ने प्रावधान खोई ? अथवा, एउटा ठेक्का समयमा सम्पन्न नहुँदासम्म अर्को प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने प्रावधान खोई ? शुरुमै मोबिलाइजेशन फण्डका नाममा दिइने २० प्रतिशत भुक्तानीबाट १० तिर हात हाल्ने गरिन्छ । मुन्द्रेदेखि कर्मचारी, नेता र मन्त्रीसम्मलाई त्यही पैसा बाँडेर विभिन्न काममा हात हालिन्छ । यातायात र ठेकेदारको सिण्डिकेट तोड्ने भनेर काम गर्न नसकेजस्तो भद्रगोल छ, सबैतिर । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, नियमावली, करार ऐन, आर्थिक कार्यविधि २०५५ लगायतलाई संशोधन गरेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन ढिलाइ भइसक्यो । कि संविधान फेल हुनुप¥यो । नत्र, यति कानुन बनाइयो, यसैमा अल्झिनुपर्दा विकास निर्माण र सुशासनको काम हेर्न पाइएन भनेर सुख पाइने अवस्था बिल्कुलै छैन । जनआस्थाबाट